Zvine Basa kana Jesu Rose? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndinoyeuka kukura mhuri yangu vaienda zvose panze kuti Isita. Taizorega kuenda kumashopu vhiki asati uye tora mufananidzo pamwe Easter Bunny. Ini pachangu funga kuti ndiye creepiest pazororo mascots vose. A yakakura mbira? Ndiko traumatizing vana. Kwete chete kuti, asi iwe waudzwa kuti kuenda kuratidza kumba kwako pamusoro vhiki? Zvisinei on Easter, taizorega kuenda kuchechi, uye ipapo taizorega kuuya kumba. Taizorega kuita Easter zai kuvhima. Taitofanira mhuri pamusoro. Taitofanira shoma Isita matengu ose dziri ikoko.
Uye vazhinji vedu tine nyaya yakadaro. Shamwari dzangu dzisiri dzechiKristu kunyange vane nyaya yakafanana chaizvo. Zvose zvinhu izvi kwatiri kukura mune tsika apo tinoziva kumuka kwaJesu ndiyo nzira shure kupemberera, asi kune vakawanda hakusi anodiwa chaizvoizvo here kuti kupemberera.
Sei Kukurukurirana uku Kunokosha
Mubvunzo tiri kukumbira uye kuedza kupindura nhasi: Zvine basa kana chaizvoizvo Jesu akamutswa kubva muguva? Ichokwadi hazvina basa kana zvose iwe Wanna kuita ndiko kuva Easter zai yakadaro. Izvozvo zvachose chokuita naJesu. Asi isu tose tinoda kupfuura kuti muupenyu. Ndinofunga uyu mubvunzo akakodzera chaizvo, uye ndinofunga zvakakosha kukumbira kuti zvikonzero shoma.
1, Vamwe regai kufunga kuti zvakamboitika. Vakawanda vedu funga kumutswa munhu afa sezvisingatomboitiki. Kana moyo kumira, hakuna upenyu zvikuru kuti vakanga. Mitumbi usaswedera kuenda zvakare. Hatina kumbobvira kuriona, hazvishandi sokuti aenderane ne mitemo yezvinhu zvakasikwa, uye vazhinji nechivimbo kuti hazvina kuitika. Saka ichi zvinokosha kufunga pamusoro.
2, Vamwe vedu pafunge sechisingabatsiri. Hatidi kufunga zvakawanda nezvazvo kana nzira. Pamwe akaita, zvichida haana. Izvozvo zvine chokuita hwangu zvachose. Pamwe Ndichaedza kuteerera Jesu pane imwe nguva gare gare muupenyu hwangu, asi zvino ndiri zvakanaka. Ndiri kufara, Ndiri vachibatwa zvinhu zvitsva, Ndiri kudzidzira, Ndiri kuedza kuvaka hwaro kana basa. Handisi kunetseka nezverumuko izvozvi. Asi kumuka hakusi sabatsira kuti munhu. Uye ini Wanna zvinoratidza kuti munguva kukurukurirana kwedu nhasi.
3, Vamwe vedu vanofunga nyaya yorumuko sezvo chete kurudziro. Zviri chiratidzo inosimuka pamusoro ako ezvinhu. Chinhu chakanaka nyaya iri akabatwa pfungwa uye mwoyo yevanhu pamusoro rokupedzisira 2000 makore. Pamwe pane yetsika kune nyaya, asi hapana kupfuura kuti.
Chikonzero Ndinofunga kuti izvi zvinokosha kuti nezvazvo nokuti zvose zvitatu maonero avo akasiyana pane zvinodzidziswa neBhaibheri nezverumuko kwaJesu. Saka kana zvakadaro vazhinji vedu vanofunga zvinhu zvakasiyana nezvorumuko kupfuura Bhaibheri tinofanira kuzvibvunza kana kwete kuti nyaya. mwaka Isita iguru mukana kuti hurukuro iyi.
Kana izvi zviri sei maonero atinoita kumuka kuti mhinduro ndikwete, hazvina basa. Asi kana iwe kare kwete wafungidzira, Ndiri muKristu uye ndinofunga Jesu chaizvoizvo akasimuka kubva muguva. Uye kwete chete Ndinofunga zvichikosha, Ndinofunga tose tariro pasina izvozvo.
Sei Ini Funga Iye Akamutswa
Ndinoda zvishoma kukuudzai nei ndinotenda Jesu akamutswa kubva kuvakafa. Handisi kupedza savi nguva iyi, nekuti haasi chinangwa hurukuro iyi. Chinangwa manheru ano ndiko kutaura kana kwete zvichikosha, asi kana ndiri kuenda kusimbirira kuti iye chaizvoizvo akasimuka uye kuita zvinotaurwa kunobva kuti, Ndinoda kuziva zvikonzero ndinotenda.
1. The Bible Treats rive chiitiko Historical
Paunoverenga Gwaro, Vaapostora regai kubata kumuka sezvo chinhu chisiri chokwadi. Zviri pachena kuti ivo havazvioni kuti kunyora ngano. Apo vaApostora kuparidza mharidzo pashure Jesu anokwira kudenga, vanotaura rufu rwaJesu (izvo uncontested) uye nekumuka kwaJesu pamwe chete simba. Sezvo kana vose vari chaizvo.
Rugwaro zviri pachena kuti Jesu chaizvoizvo akamuka kubva kuvakafa. Uye ndinotenda Gwaro kuti Shoko raMwari. Ndinotenda inogona kuvimbwa. Handifungi achavata kana ndechenhema. Uye nzira zvakanyorwa hazvisi sei ungadai nyora kana iwe wakaita dzikaipedza. Unounza neni chikonzero chechipiri Ndinotenda kumuka chakaitika.
2. Ndinovimba Reliable Testimony
Tose kugamuchira zvinhu pahwaro yechipupuriro rwevamwe. Takanga kwete webasketball, asi tinovimba announcers zvemitambo kana shamwari vaivapo Recap. Haufaniri zvinoda mumuviri uchapupu. You kuvavimba. We kurashikirwa kirasi, asi tinovimba navo kupfuudza zvavo manotsi. Takanga kwete panguva Gettysburg kero, hatina chero footage, asi tinovimba kuti zvakaitika. Tinovimba kuti mashoko iwayo iwayo Abraham Lincoln.
Zvino ndinoziva izvi yakasiyana rumuko, asi ndinoti kutaura, pane zviitiko tichitenda zvakaitika nokuti ratakanzwa nezvazvo kubva akavimbika. Chinhu dzinongoitika uye akachenjera chinhu kuita kana hapana chikonzero vasavimbe naro.
Vanhu vanotaura kwevakafa muBhaibheri, muri sokuziva ndinogona kuudza, yakavimbika zvapupu. Hapana chikonzero ini vasavimbe navo. Saizvozvo, paiva nemazana ezvapupu vakaona Jesu. Ini handigoni kufunga chero dare apo 500 zvapupu zvakaona zvaisazova zvakakwana kuratidza nyaya. Ndinotenda kuti uchapupu hwawanda uye kuti Jesu anofanira kunge amuka kubva kuvakafa.
3. Ndicho Zvakanakisisa Tsananguro Chokwadi Chacho
Pakatanga Christianity unofadza zvikuru. Imi wechiJudha murume akaberekerwa muGarirea, achidzidzisa ane mhando mutsva simba. kuita zvishamiso. kuunganidza vateveri. Kuwana vari mutsekwende nevane masimba vechiJudha. Kutizwa neshamwari dzake. Being akapondwa. Zvino guva rake unowanikwa kuva chinhu.
Uye zvimwe murume uyu, uyo akati aizoita kunoshamisa epanguva utongi, ushe, kunovakazve temberi muna vatatu days- kunyange zvazvo iye akafa anova tsime sangano. Vadzidzi vamusiya. Vakanga vachitya uye mwoyo nokuti sokunge vakamutevera pasina. Asi zvino patinoverenga bhuku reMabasa, tinoona kuti zvavari kamwe kamwe vakakurudzirwa uye akashinga. Uye achida nokutambudzwa Jesu.
Vanodzidzisa kuti iye Mwari, kuti tsika nemagariro chechiJudha, anoona kuti Mwari ndiye mumwe chete. Vanodzidzisa kuti wakamutswa kubva muguva, uye vanodzidzisa izvozvo nokukurumidza pashure zvinoitika. Saka vanhu vachiri kumativi. Kana hazvina kuitika, zvingazikamwa squashed. Zviremera angadai dzima ezvinhu yose, waiva ngozi kwavari, nekungoti nokuratidza vanhu muviri wake. Sangano rinokura, uye vateveri vaJesu vakawanda. Zviuru nokukurumidza pashure. All asi umwe gumi wevadzidzi ivavo, anotozopedzisira vakapondwa kutenda kwavo muna Kristu. Akaponda munhu uyu. Vakanga nechokwadi, uye akaita kuti chokwadi kuti aiva Mwanakomana waMwari, amuka kubva kuvakafa kuti vakaurayiwa nokuti.
Unoziva sei kutsanangura kuti? Ndinofunga yakanakisisa tsanangudzo mashoko iwayo, ndiko kuti iye chaizvoizvo rinobuda kubva muguva. Ndinoziva handidi kufira yezvechitendero kuti ini inoumbwa. Chinhu bedzi aigona vabvume zvose izvi vanhu, ndiko kuti iye chaizvoizvo akamuka.
Saka kuti mupfungwa, Ndinoda kutaura kuburikidza vamwe zvinorehwa yorumuko.
Saka vamwe nguva, tichataura pamusoro iwoyo mubvunzo ipapo. Zvine basa kana Jesu amutswa kubva muguva. Ndava kukuudzai nei Ndinofunga zvichikosha. Ndava kuzviita nokutarira ndima muBhaibheri, 1 Corinthians 15. Uye kubva mundima kuti, Ndava kukuratidzai dzinomutswa vatatu rumuko.
mu 1 Corinthians 15, Pauro anozvitaura kumuka kwete chete sezvo chenhau, asi sokunge kuti nechirevo upenyu norufu.
Izvi zvikonzero zvitatu zvinokosha chaizvo kuti mumwe chete wedu muimba ino. Vanokosha nokuda kuroora munhu wose mupenyu. Uye muchaona nei ndinotenda kuti nechinguvana. Pano ndizvo Pauro anoti:
Asi kana pasina kumuka kwevakafa, ipapo kunyange Kristu akamutswa. Uye kana Kristu asina kumutswa, naizvozvo kuparidza kwedu hakuna maturo, nerutendo rwenyuwo harwuna maturo. Tiri anowanikwa kunyange kuti misrepresenting Mwari, nekuti takapupura kuti Mwari wakamutsa Kristu, uyo haana kusimudza kana chiri chokwadi kuti vakafa havamutswi. Nokuti kana vakafa vasingamutswi, kunyange Kristu akamutswa. Uye kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwako hazvina maturo uye muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo varere muna Kristu vaparara. Kana muna Kristu tine tariro muupenyu huno chete, tiri vanhu vanosiririsa kupfuura vanhu vose.
(1 Corinthians 15:13-19 BSN)
ini. Dai Jesu haana kusimudza, hakuna Good News
Ko ndinoreva kubudikidza kuti? Chokwadi pane zvinhu isu dzimwe nguva pano munhau zvakanaka. Asi ndinoreva chaiyeiye akanaka, zvinotaurwa neBhaibheri Gospel. Chokwadi, kunyange zvazvo pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoitika nhau uye muupenyu hwedu, kunyange zvinhu zvinogona kutipa tariro kwekanguva, hapana wevaya zvinhu zvinogona kutipa tariro hunogara.
A mutero dzosera cheki havagoni kutipa tariro zvechigarire. Kubvuma mupurogiramu kudzidza haagoni kupa YS tariro zvechigarire. An kuroorana kana muchato, havagoni kutipa tariro zvechigarire. Zvose izvi achasvika pakuguma. Uye vanogona inobvutwa kwatiri nechinguvana. Pane tariro ipi neipi yokuti kwozoti? Pane tariro ipi neipi yokuti zviri kudenga nepanyika uye chikuru?
Bhaibheri sezvazviri chaizvo uye akatendeseka pamusoro mamiriro edu enyika. We akadamburwa, nyika yedu wakaputsika, uye zvose zvakasikwa anofanira ichadzorerwa. Tinoziva nyika yedu runovhuniwa. Kubva dzinongoitika dzoga kuti chirwere. uye utsotsi. Zvinoita sokuti pane guru idzva kupfura zuva ikozvino. Chii chiri kuitika? mukuputsika.
Hazvingobatanidzi kunze uko zvazvo. Tose akadamburwa zvakare. Uchapupu ichi muupenyu hwedu ndiko zvedu, zvinotidya mwoyo, yedu kuputswa noukama, vachinetsana, uye kupfuura zvose, kwedu kuparadzana naMwari.
Wakambofunga kuti nei tiri nzira tiri? Sei hazvinei tinoedza zvakadini hatigoni kuva vakakwana? Sei tinoita zvinhu zvatinoita? Nei tichiramba kudzokera zvinhu tirambe kutirwadza? Nei tichiita zvisarudzo zvinoparadza? Sei isu vamwe? Tiri kuputswa. Ndicho nhau zvakaipa.
Jesu Ndiye uyo akatumwa naMwari kuti adzorere, uye zvakananga kuti isu kuMusiki wedu kudzosera. Ndicho nhau Good.
Hapana mubvunzo kuti chiKristu chakasiyana pakati Zvitendero zvenyika. Chimwe yakasiyana zvinhu nezvechiKristu ndechokuti zviri kwakavakirwa munhau zvakasiyana nevamwe. Pane zvimwe zvinhu chaizvo zvakaitika kuti tinovimba. Tinovimba munhu chaiyeiye, akanga chaizvoizvo akaurayiwa, uye ndiani chaizvoizvo amutswa kubva kuvakafa. Uye kana zvinhu hazvisi zvechokwadi, ipapo vhangeri Muponesi hazvisi zvechokwadi.
Muhammad muporofita mukutenda Islamic, wafa. VaMuslim unoziva muviri wake uye guva rake ndivo. Uye izvi pasina nzira kunokanganisa kutenda muMuslim raMwari.
The Buddha akanga cremated afa, uye kune kupiswa zvinoera kuti zvakaendeswa mhuri dzakasiyana. Saka tinoziva muviri Buddha uko kuri. Uye kuti hapana nzira kunokanganisa kutenda muBhudha wacho.
muviri Confucius 'akavigwa yokwaakazvarirwa muna China. Ndizvowo zvinogona kutaurwa Joseph Smith, siyana Pope zvaJehovha, nezvimwewo. Uye chokwadi chokuti vanhu ava vakafa hapana nzira zvichikuvadza kutenda kwavo vateveri.
Asi kana munhu ari kuwana chitunha chaJesu, ChiKristu anenge asisipo. Machechi echiKristu hazvina zvazvinobatsira. vaparidzi vechiKristu vari varevi venhema. Uye vateveri vaKristu vari tariro. Chokwadi kana chitunha chaJesu aivapo kuti muwanikwe, zviremera angadai chete dzakaratidza kuti vanhu Squash kuparadzirwa rechitendero kuzvipira kumunhu. Asi pfungwa ndiri kuita ndechokuti chinokosha.
Teerera zvinotaurwa naPauro anoti muno 1 Corinthians 15. Pakutanga iye anotaura neEvhangeri kana vhangeri sezvo chinhu chinonyanya kukosha. Anoti ndizvo akaparidza kwavari, vagamuchira, ivo Pari kumira mairi. Asi kuteerera zvaanotaura mundima 14.
"Uye kana Kristu asina kumutswa, naizvozvo kuparidza kwedu hakuna maturo, nerutendo rwenyuwo harwuna maturo. Tiri anowanikwa kunyange kuti misrepresenting Mwari, nekuti takapupura kuti Mwari wakamutsa Kristu. "
Pauro haafungi kumuka ndiwo mamwe kurudziro nyaya. Anofunga ari mukutenda payo. Saka kana tikabata saizvozvo vamwe kurudziro nyaya, tinogona uyewo kurega kunyepedzera kuti ndicho chiKristu. Tingabvumirana uyewo kunyange kushandisa Bhaibheri kuti. Ndizvo kwete zvairehwa kana chinangwa Paul. Uye ane kushungurudzwa chitsvene chinyorwa kurapa izvozvo.
kutenda kwechiKristu kunobva News. Zvinofanira inobva kuziviswa mashoko nezvoupenyu, rufu, uye kumuka kwaKristu.
Kana kuti hazvina chokwadi, Ipapo Pauro kuparidza pasina. Kwete chete kuti, asi kutenda hwomuKristu pasina. Zvii zvandiri nokutenda muna, kana nyaya Jesu haana nokuguma chakanaka? Pane nhau dzakaipa bedzi. Ndiri mutadzi, Jesu akaedza kuita chimwe chinhu pamusoro kuti, asi pakupedzisira rufu ndokumutorera
Saka kana haana kumutsa, hakuna Good News.
Asi sezvo akanga kumutsa, pane Good News
Pane Mashoko Akanaka! Mashoko ndokwechokwadi. Tinogona kudzorerwa Mwari. Ndinoda kuverenga imi endima okutanga shoma 1 Corinthians 15.
Zvino ndinoda kukuyeuchidzai, hama, chevhangeri ndakaparidza kwamuri, yamakagamuchira, umo iwe umire, uye yauri kuponeswa, kana iwe kubatisisa shoko ndakaparidza kwamuri, kunze kwekuti makatenda pasina. Nekuti ndakakumikidza kwamuri pakutanga kukosha izvo zvandakagamuchirawo: kuti Kristu akafira zvivi zvedu maererano neMagwaro, kuti akavigwa, kuti akamutswa pazuva rechitatu maererano neMagwaro, uye kuti Qwakaonekwa kuna Kefasi, akazozviratidza kune vane gumi nevaviri. Akabva akazviratidza kuhama dzinopfuura mazana mashanu panguva imwe chete, vazhinji vavo vachiri vapenyu, kunyange zvazvo vamwe vavete. Akabva akazviratidza kuna Jakobho, ipapo vose vaapostora. Last zvose, sezvo imwe rwaikurumidza kuuya zvarwa, akazviratidzawo kwandiri.
Jesu akafira zvivi zvedu. Uye akasimuka zvivi zvedu. Ndizvo chikamu nyaya Gospel. Ndizvo akanaka zvikuru vatadzi.
Chokwadi chokuti Jesu akamuka kubva kuvakafa kunoratidza zvose akati nezvaMwari uye nezvake. Ndizvo zvakaitwa inoratidza mashoko ake. Ndicho vanoti hapana mumwe mutungamiriri chero kutenda kunogona kana aizoita.
Munoona kuti nhau iyi zvikuru Pauro kuti anoti kana kunyange chikamu hachisi chokwadi, naizvozvo kuparidza kwake hakuna maturo. Funga pamusoro chechi ukaenda neSvondo. Kana rumuko haana chokwadi kuti mararamiro avo achiparidza zvachose? Unoziva kunyange kunzwa pamusoro rufu uye kumuka kwaKristu uye kuti rinoshanda sei muupenyu hwedu?
kumuka iyi zvinoshanda hwako. Zvichishungurudza Nokuti upenyu hwakaoma. Zvivi zvechokwadi. Urwere ariko. Rufu chaiye. Pane akanaka kwatiri? Ndiani anokunda pakupedzisira? Pane mashoko akanaka. Jesu akamuka kubva kuvakafa. Uye kuenda kuti zvinhu zvose zvive zvitsva. Pabwiro kunoratidza kuti zvipikirwa zvake ndezvechokwadi.
Ngatitaurei ramba kutaura zvazvinoreva
II. Kana Kristu haana kumutsa kuvakafa, hapana kukanganwirwa
Ndiri kuzoverenga vamwe anongoitika mashoko nezvokukanganwira.
"Ishe kumukanganwira, iye akadzitora masimba erima maari / asi naiyewo ane chikonzero vakarurama nokuda kutadza. "
"Ishe ndinokumbirawo mundiregerere sinnin wangu '/ I haasi kuti ndine dzapedza / Asi ndiri ndichinyengetera pachine / Bvisai nzira maziso ake aitarire akafanana ivo playing bhurukwa rangu."
"Ndinonyengetera Ndiri zvaregererwa / pazvisarudzo zvose zvakaipa ndakaita / wose hanzvadzi Ndairidza / mhaka ndichiri paranoid nanhasi / Uye munhu mhosva Ndakaita sarudzo chandakaita / Ndicho ndakasarudza upenyu, kana pane, hupenyu akandisarudza "
"Ndinoedza kuita sepasina ndine siyana asi pakupedzisira tose tiri zvakafanana / ndinonyengetera kuna mwari, baba kukanganwira N **** Ndiri kumbobvira gonna shanduko. "
"Ini ndiri mutadzi, Zvichida ndiani gonna chivi zvakare / Ishe andikanganwira, Ishe ndiregererei / zvinhu handina kuzvinzwisisa. "
Munhu wose anokoshesa kukanganwirwa. Kunyange varume vane pachena kuti havadi pamusoro chaizvoizvo achichinja. Munhu wese anoda kuti tikanganwirwe.
Kuda kwedu Forgiveness
Hapana munhu pano ndiani akakwana. Tose hatina kukwana uye tinotadza. Chivi hachifarirwi shoko rakadaro. dzimwe nguva isu vanoda mashoko manyoro akaita zvaunokanganisa, kana kusakwana, kana kukanganisa, asi shoko "chivi" anotaura chinhu chaiwo pane mamwe mashoko iwayo. Kana Bhaibheri rinotaura nezvechivi zvinoreva wasikateereri Mwari zvaunoita, mashoko ako, kana pfungwa dzenyu. Zviri asipo chiratidzo, vaikundikana zvinodiwa naMwari, aiming panguva isiri chiratidzo, kupandukira Mwari.
Uye Bhaibheri rinoti kuti zvivi havasi asingashumbi wakaputsika mitemo, asi kuti chivi kusateerera kunangidzirwa zvakananga pana Mwari pachake. Mwari anotora chivi pachedu, somunhu oga kurwisa paari uye runako rwake, njere, uye kubwinya. waizozviita Saizvozvowo tora munhu unopfuta imba yenyu pasi, kwete chete sokurwiswa imba yenyu, asi iwe pachako, Mwari anotora chipi kusateerera kubudikidza zvaakasika sokurwiswa paari. Hapana asingadi varidzi. Chivi mhosva Mwari wakanaka. Uye kuti Mwari ndiye Mutongi tichasangana kumira pamberi.
Heunoi mubvunzo wangu kwamuri: Munotarisira kuti kuregererwa zvivi ivavo? Sei? Ko mutongi akanaka nokusingaperi regai vatadzi kure chirauro kwakadaro chinhu icho chivi chakashata chivi sezvo? Zvakanaka chete nzira iyo Mwari anokanganwira chivi kana zviri kare inobhadharwa. Uye pane chete anenge kumbobvira kubhadhara zvivi, Jesu. Uye kumuka kwaJesu ndiyo uchapupu kuti muripo chakagamuchirwa.
Chimwe chezvinhu naPauro pamusoro kana Jesu asina kumutswa ari: "Kutenda kwenyu hakubatsiri uye muchiri muzvivi zvenyu."
Zvazvinoreva kuva muzvivi zvenyu, ndechokuti unofanira kubhadhara kwavari. Zvinoreva kuti uchiri pasi uchinyora. Zvinoreva uri muhusungwa vachiri kwavari. Zvinoreva hauna nokudzikinurwa kubva kwavari. Zvinoreva here hakuzoregererwi kwavari. Kuregererwa zvitadzo dzavo dzose ndedzechokwadi chaiwo kwekumuka pamuviri kwaJesu Kristu.
Muchinjikwa ndimo Jesu Makakunda chivi. Ndizvo zvakafanana mutsimba machisi nechivi uye zvakaipa. Uye kana Jesu haana simuka, zvinoreva chivi Yacho.
Zvimwe zvitendero havaiti zvikuru kuregererwa kwezvivi. Hapana tsanangudzo yokuti nei mutongi akanaka kwaizoita tsitika navo. Kuwana kudenga ari kuita zvakawanda zvakanaka pane zvakaipa, asi zvakadini zvakaipa? Hapana vedu kurumbidza mutongi uyo ngaave nemhondi kure chirauro nokuti akabatsira tsaru mudzimai mhiri kwomugwagwa rakatevera. Chivi chinofanira inobhadharwa.
Haudi kumira pamberi paMwari muzvivi zvenyu. Kune nzvimbo mbiri unogona kuva, muna Kristu kana muzvivi zvenyu.
Uye kana Jesu haana kusimudza, hapana kukanganwirwa.
Asi sezvo akanga kumutsa, pane kukanganwirwa zvivi!
Jesu akaita zvakawanda mhando yechitendero munopenga nokuti, kwete chete akanga ari kuporesa vanhu, asi akanga achivaudza zvavo zvaregererwa. Jesu aiva nesimba rekuregerera zvivi. Papa haanesimba kuti, vafudzi havana simba kuti, Vapristi havana kuti authority- Mwari chete. Uye Jesu akanga ari Mwari munyama.
Timwise chezwi ruregerero. Itii shamwari yangu nembama ini kumeso. Hazvina kuregererwa kana ndakati zvakangonaka, asi aronga kumurovawo nokuti paya. Kukanganwira hazvirevi chete kureva Ndinobvuma ruregerero kwake, zvinoreva andinoita iye sokunge akanga asina kutadza vakandidarikira. Zvino ini anogona vakavhiringidzwa uye dhadha pose anoenda kuti mukuru shanu. Ndirege kuvimba naye chete, asi handidi abate kuti chivi pamusoro pake. Handidi kuedza kudzokera kwaari, kana kuva zvinovava kwaari. Ukama hwedu kunogona kudzorerwa.
Chivi kwakakomba mhosva pamusoro Mwari. Zviri saka zvakakomba kwaari, kuti kwete kurerutsa nayo. Aiziva yaifanira kutsiviwa. Uye Mwari akatida zvokuti akatuma Jesu. Jesu akatida zvokuti aida kutora kuti chirango panguva muchinjikwa kwatiri. Ndizvo remuchinjikwa. NdiJesu achipindira nekutora kurangwa kuti vatadzi vanokodzera.
Zvakafanana ndiri mudare uye ndine zvakajeka mhosva, asi panzvimbo kurangwa munhu anotora kuti chirango nokuda kwangu.
Kana tikavimba Kristu Mwari rinodzorera ukama hwake nesu. Achazviita uchapusika ratakaita yakachena. Chinhu aisava nemhosva kubva Mutongi wezvose. Achatora isu kugamuchira noukama naye. Haazotitongeri zvedu zvinotipupurira.
Romans 4:7-8 anoti, "Vakaropafadzwa avo vane mabasa okusateerera mutemo zvaregererwa, uye vane zvivi zvakafukidzirwa; wakaropafadzwa munhu naani Ishe haangandinzwi kuverenga chivi chake. "
Hapana chinhu pasisina zvaityisa kwose Universe pane kumira pamberi paMwari muzvivi zvenyu. Asi hakuna chikomborero hapana mukuru zvose zvakasikwa, pane kuti tikanganwirwe naMwari.
kazhinji, VaKristu vane mukurumbira nevamwe wokuva achizvipa akarurama. Uye ndinofunga kuti ndicho Zvinosiririsa. Nekuti tsanangudzo kwokuvimba Kristu ndiye chaiyo pakatarisana kuzvida kururama. Zviri Kubvuma hatina kururama. Uye kuuya Mwari mukutenda, iye isu kuti aizokanganwira yekusarurama kwedu. Saka kana vaKristu vakaona kutenda kwamuri, nenyasha navo. Ndizvo kwete zvaaidzidziswa Kristu
Unoshuva kuregererwa kwezvivi zvenyu? Ndinoda kuti kufunga hwako. Kune zvinhu zvakawanda isu maita kuti havana kodzero. Takaona nhema, uye takave vakachiva. Vakawanda vedu vakanyepa uye rwawana vakadhakwa. Vakawanda vedu zvakabiwa uye vanonyengera. Vazhinji vedu anovenga vamwe, tiri simbe, uye zviri aigona kuenda mberi. Tose. Upenyu hwedu zvinogumbura Mwari mutsvene. Uye Handizivi kana Unoshuva kuregererwa zvivi ivavo.
The Good News ndiye, kuti kukanganwira inowanika Jesu Kristu. Asi chete kana iye chaizvoizvo akamuka kubva kuvakafa. uye chete, kana tikatenda upenyu, rufu, uye nokumuka kwaJesu.
Ngationei chokupedzisira kunanga
III. Kana Kristu haana kusimudza, hapana upenyu husingaperi
Mumwe nomumwe wedu anoziva kuti pane chimwe chinhu zvisina kodzero nezvorufu. Kana tikaenda pamariro, hakuna kumbobvira piñatas uye confetti. Pane kutambudzika. Kune misodzi. Kazhinji pane mufaro uyewo kupemberera hwavo. Asi kana tikafunga nezvorufu pacharwo, pane yakawanda kusuruvara zvinobatanidzwa. Nekuti rufu kururama. Hazvina tyisa.
Tiri saka kushandiswa rufu, kuti sokuti chete chokwadi avo tinofanira kubata. Asi izviwo chinhu chakaitika pashure chivi chakapinda munyika. Rufu chinoitika nokuti tiri vatadzi. Hazvina zvakanaka. Uye kana tiri nechinguvana mukupererwa, hakuna pakati pedu vanoshuva rufu. Tinoda kurarama.
Unofunga uri kuenda kuDenga paunofa? Vakawanda vedu tinofunga Denga inzvimbo yakanaka, apo hama dzedu kuenda kana upenyu pamusoro. Uye isu kinda tariro isu ikoko. Uye kuti achipfeka, kuti tafa, haasi magumo. Well Paul anoti, kana pasina kumuka, ipapo hapana.
"Ipapo vaya varere muna Kristu vaparara. Kana muna Kristu tine tariro muupenyu huno chete, tiri vanhu vanosiririsa kupfuura vanhu vose. "
Paiva vanhu kuti vaida kuti zvakanga zvapfuura, zvakafanana kwatiri. Pauro ari kutaura nezvevaKristu vanoziva vakafa. Zvino Pauro akati kana Jesu haana kumuka, ipapo ivo chete vakaparara. Vari aita. Hakuna mukusingaperi Mwari.
Uye anoenda mberi kutaura, iwe unofanira tsitsi vaKristu. Unofanira unonetsekerei kwatiri.
Nei Tichingogara vanosiririsa?
Zvino vanhu vakawanda vanofunga chiKristu chinhu apo iwe chete kuenda kuchechi dzimwe nguva randomly, uye zvichida unorangarira Munyengetero waShe, havanzwisisi kuti nei Pauro kutaura izvi. Nekuti mupfungwa dzavo, chete chinhu vaKristu chaizvoizvo kurasikirwa ndiye Sunday. Asi kutevera Kristu saizvozvo zvakawanda.
Kristu kunoda kwedu zvose. Akakumbira zvose. Anobvunza kuti tinoisa hwedu pasi. Kuti isu atakure muchinjikwa. Kuti tikavakira upenyu hwedu vakamupoteredza. Uye kana akaita chaizvoizvo kusimuka, tiri benzi. tsitsi isu. Nekuti zvose isu maita ndiye kukanda hwedu kure pasina chikonzero.
Kana Kristu haana kusimudza, hapana upenyu husingaperi.
Asi sezvo akanga kumutsa, pane upenyu husingaperi!
Nokuti Mwari wakada nyika, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani unotenda maari arege kuparara asi ave noupenyu husingaperi.
Pane husingaperi. Unogona vachamutswa. Uye kurarama nokusingaperi naMwari. VaKristu havasi vanosiririsa. VaKristu ndivo vaya vane tariro mhiri guva. Ungaitei kuti munhu asingapindi kutya rufu? Pauro ndiye muenzaniso mukuru izvi VaFiripi 1. Iye hwakanaka rufu nokuti zvinoreva awana kuenda naJesu.
Unoudzawo kuti kusatya kuti Pauro ane? Kunobva munhu anenge vachivimba chokwadi kufa nekumuka kwaJesu chete.
To kupfupikisa: Ehe. Zvichishungurudza kana Jesu akasimuka. Iye akaita kusimuka. nyaya yake zvakafanana nevamwe kuti akafa. Munhu wose anofa. Asi haasi munhu wose anosimuka. Jesu akamuka. Uye anovimbisa kuti kana tiri maari isuwo ruchasimuka uye vanopedza yedu mukusingaperi naye. Wati wakavimba naye?
Paul • Kubvumbi 18, 2014 pa 11:47 ndiri • pindura
Ndatenda, Pastor Lee. “Jesu Ndiye uyo akatumwa naMwari kuti adzorere, uye zvakananga kuti isu kuMusiki wedu kudzosera. Ndiyo nhau dzakanaka.” Kuti mashoko akanaka! The confetti Chikamu wandiita chiseko. Une yakasiyana pfungwa zvinosetsa kana aunoparidza. Zvakanaka.
Evan • Kubvumbi 18, 2014 pa 2:14 pm • pindura
Ida kusiyana iwe kuisa kuchiKristu kumbofunga ndokunyura kune zvimwe zvitendero kuziva tiri chete ndivo vanogona kutaura tine muponesi kuti akafa uye akamuka mupenyu, iye chaizvoizvo ari pano uye aenda panguva imwecheteyo kuenda kundokugadzirirai nzvimbo kwatiri
CynthiaAghomon • Kubvumbi 18, 2014 pa 6:27 pm • pindura
Jesu ndiye zvose zvechokwadi…hakuna chiKristu pasina Jesu uye upenyu angadai asina zvaanoreva uye tariro pasina mukurovererwa kwake, rufu uye rumuko. ndinonyengetera yakawanda maziso richava rakazaruka chokwadi chiitiko ichi mbiri.
Taurai: VulcanYouth » Isita!!
JacobAlger • Kubvumbi 20, 2014 pa 8:11 pm • pindura
Man Trip, ngaavongwe nokuti kugovana. Uyu ndomumwe shoko simba. Ndava mutendi kubva ndichiri mwana asi ndakazviwana kubvunza mubvunzo uyu chaizvo chete Easter iyi. shoko renyu uye nedzidziso yaPauro inoita kudaro pachena. Ndinoonga mwoyo yenyu mashoko, maropafadzo dude yangu!
Mario A. Ramirez • Kubvumbi 22, 2014 pa 4:04 ndiri • pindura
Thanks guru nguva BRO
DiDi • Kubvumbi 22, 2014 pa 7:22 ndiri • pindura
Ndiregerereiwo nokuti nonoka, asi kana usina kushandura zita kubva vhaira pamusoro ishe wangu yakavakwa kuzvikudza? wo, kwazvo chidimbu pamusoro achitandadza Easter!
TAREKcReSTIK • Chivabvu 20, 2014 pa 8:27 pm • pindura
Aye rwendo, Ndine mubvunzo, whatre pfungwa dzenyu pamusoro Pasika uye zvebhaibheri yemitambo?
Greg • Mbudzi 3, 2014 pa 7:58 pm • pindura
Ndinotenda chaizvo kugovana kwako Shoko raMwari! This post rinokurudzira zvikuru ini. Patova nakisa zvakaoma kuchengeta Jesu’ kukunda pamberi pfungwa dzangu. Patova rinenge gore kubva wangu mukoma 17 yrs akafa. In nokupenya Mwari akatora upenyu hwake kuburikidza aiita tsaona zvachose kuti havambofaniri zvakaitika. Ndakapedza nguva zvikuru naye; hwangu upenyu hwose chakachinja mukuru nzira nokusingaperi–zvakaoma kudavira kuti ndiri kuuya pamusoro ari mukuru yaakamboti akanga. I achamuona zvakare? Acharamba simuka?
Ndakauya this post nekuti ndakanga saka akakurudzirwa rwiyo yako “Razaro.” Unofanira akandikomborera chaizvo, uye ndine kukutendai nekugoverana chakadzama chokwadi kuti, nekuti Jesu akamutswa mukukunda pamusoro rufu, Ndinoziva kuti ini achamuona chiso nechiso…uye mukoma wangu zvakare. Ndinovimba uri kukurudzirwa vo!
Taurai: La Sagrada mhuri, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • Gumiguru 15, 2016 pa 11:34 ndiri • pindura
nyaya iri zvakadzama kuti zvose kare ndedzechokwadi ndechokuti Kristu akamutswa kubva kuvakafa …
nevamwe vaprofita vose kumboona chiedza zuva kubvira vakaenda tsoka nhanhatu zvakadzama ….
500 zvapupu hachisi chinhu kuti aregeredza kusiya … uti rimwe bloke akafanana Jay z akafa uye kwapera mazuva matatu akadzoka kubva kuvakafa !!!!
vezvenhau washout yaizova hombe hapana???
asi ndezvipi zvaangaita kuti 500 pepo vaizopupura chiitiko ichi sezvo zvichiitika ???
asi kana Kristu asina kumutswa kuvakafa fungidzira munda zuva simba wechiJudha angadai !!!!
ari ramifications yaizova kunoshamisa …
ChiKristu aizova chitendero kupfuura anomhura iri nyika kwete???
asi zvatinoziva kuti nyaya inoguma tine tariro yokuti vakafa muna Kristu vachamutswa uye kuti kunopfuura akanaka!!
JNote • Chivabvu 3, 2017 pa 1:07 pm • pindura
Trip murume, Mwari vakukomborere! Kuteerera mharidzo yako nedzidziso uye mumhanzi, Zvechokwadi anosimudza kundimedza. Kuti mashoko akanaka, Vhangeri, ndicho chinhu vanhu vanofanira kurarama kunze kakawanda uye Ndafara kukuona kuzviita murume. Kutarisa nzira Mwari ari kushandisa iwe, kunondibatsira chaizvo kubva tinoita zvakawanda zvakafanana zvinhu, musically uye muushumiri, saka vanoramba vachiti hungu Mwari murume, Ndiri kukunamatira.